‘महानायक’ मात्र होइन दर्शकले मलाई भगवान मान्नुहुन्छ तर, म भगवान त होइन नि ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘महानायक’ मात्र होइन दर्शकले मलाई भगवान मान्नुहुन्छ तर, म भगवान त होइन नि !
काठमाडौं । राजेश हमाल केही साता यता विवादमा मुछिएका छन् । अभिनेत्री तथा निर्माता दिपाश्री निरौलाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा मिडियाले राजेश हमाललाई ‘महानायक’ बनाइदिएको र उनी महानायक नभएको बताएपछि हमालका फ्यान उनीविरुद्ध खनिएका थिए ।
हमालको समर्थमा फ्यानहरुले दिपाश्री, दिपकराज गिरी लगायतका कलाकारलाई गाली गरेपनि लामो समय हमाल भने चुपचाप बसेका थिए ।
उनी केही दिन अघि मात्र आफ्ना समर्थक सुभेक्षुकलाई गाली गलौजमा नउत्रन र माफ दिन आग्रह गरेसँगै यो प्रकरण केही सेलाएको छ ।
त्यसोत अन्तर्वार्ता पछि दिपा र दिपकराज गिरीले पनि माफि मागेका थिए । तर उनीहरुमाथिको आक्रमण भने रोकिएको थिएन ।
एसैबीच सोमबार एपीवान टेलिभिजनमा अभिनेता हमालको एक अन्तर्वार्ता प्रसारण भएसँगै उनी फेरि चर्चामा आएका छन् ।
त्यसक्रममा उनले महानायकबारे पनि बहस गरेका छन् । आफूलाई केही व्यक्ति र संस्थाले महानायकको सम्मान दिएको भन्दा पनि आम नेपाली दर्शकले आफूलाई स्वीकार गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले उपाधि वा स्याबासीले उर्जा र हौसला मिल्ने भए पनि आफूले आफूलाई भगवान नठान्ने बताएका छन् ।
कति दर्शकले आफूलाई ‘महानायक’ मात्र नभएर भगवान समेत भन्ने गरेको सम्झँदै उनले भनेका छन्, ‘तर म भगवान त होइन नी । त्यो भ्रम पैदा हुनु पनि हुँदैन ।’
अभिनेता राजेश हमालले आफूले पाउने स्याबासी र आलोचना दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने बताएका छन् ।
उनले थपेका छन्, ‘स्याबासी कसलाई मन पर्दैन । तपाईंले केही कार्य गर्नुहुन्छ र कसैले स्याबासी दिन्छ भने कसलाई मन पर्दैन । त्यो स्याबासीको मुख्य उद्येश्य तपाईंलाई आफ्नो कार्यमा प्रेरित गर्ने हुन्छ ।’ स्याबासी पाएको भनेर फुरुङ्ग भए प्रतिउत्पादक हुने उनको भनाई छ ।
दुखद खबर, नेपालमा आज मात्रै कोरोनाबाट थप ८ जनाको मृत्यु, अवस्था भयाभह बन्यो